Waxtarka dhagayaraha - 10 faaiido - Caafimaad tips
Home / Dhirta / Waxtarka dhagayaraha - 10 faaiido
Waxtarka dhagayaraha - 10 faaiido
Daily Active March 20, 2020 Dhirta
Dhagayaraha waa ubaxa ama caleenta geedka loo yaqaano cloves waana midho faaiido badan cabitaan ahaan iyo cunto ahaan waxaana lagu darsan karaa cuntada iyo cabitaanka waxaa la sheegaa inuu ka soo jeedo dalka indonesia iyo meelo kale oo ka mida qaarada afrika.
Dhagayaraha waxa geed udgoon badan oo lagu darsado cuntada sidoo kalena waxay umado badan u isticmaalaan daawo dhaqan ahaaneed sidaas daraadeed soomaaliduna waxay ku darsadaan shaaha iyo cuntada iyago oo aaminsan inuu xanuuno badan ka hortago taasina waa run oo wuxuu ka hortagaa dhammaan xanuunada iyo cudurada bini aadamka dhibaato u gaysta.
Dhagayaraha wuxuu ka kooban yahay oo ka buuxa fiber, fiitamiino iyo macaadiin sidaa darteed hadii aad ku darsato cuntada waxaad ka helaysaa nafaqooyin muhiim ah.
Waxaa ka buuxa xadi aad u badan oo ah maadooyinka jidhka sunta ka saara ama ladagaalama ee loo yaqaano antioxidants sidoo kale maadadan waxay hoos u dhigtaa walwalka.
Dhagayaraha iyo xanuunka : dhagayaraha waa geed xanuun baabiye ah waxaa loo isticmaalaa daawaynta ilkaha sababtuna waa saliida dhagayaraha ee loo yaqaano eugonol oil.
Dhagayraha iyo beerka : daraasadaha qaar waxay sheegaayaan faaiidooyinka dhagayaraha laga helo darteed in shaqada beerka uu wanaajiyo waa hadii uu qofku qadar yar oo ku filan ka qaado, waayo faaidooyinka dhagayaraha waxa kaloo kamida oo ku jirta maado loo yaqaano eugonol taas oo u wanaagsa beerka.
Dhagayaraha iyo kansarka : sidoo kale daraasadaha qaarkood waxay tilmaameen in dhagayaraha uu la dagaalamo kana hortago cudurka kansarka waayo maadada aynu soo sheegnay ee loo yaqaano eugonol ayaa ah mid ka hortag u ah kansarka.
Dhagayaraha iyo dheefshiidka : waxyaabaha kale ee lagu daaweeyo dhagayaraha waxaa ka mid dheefshiid xumada iyo calool majiirka iyo shubanka waayo dhagayaraha wuxuu ka qayb qaata shiidida cuntada iyo la dagaalanka bakteeriyada caloosha, taasi waa faaidada dhagayaraha ee kugu riixaysa inaad cuntada ku darsato inta badan.
Dhagayaraha iyo uurka : maadaama geedkan uu leeyahay waxtar iyo faaiidooyin caafimaad isla markaana nafaqooyinkiisa ay badan yihiin taas macnaheedu maaha in qofkastaa uu isticmaali karo sababtoo ah waxaa jira dad aan qaadan karin sidaa darteed hooyada uurka leh maaha inay isticmaasho geedka ilaa mooyee hadii uu dhakhtarkeedu kula taliyo.
Faa'iidooyinka dhagayaraha ee kale waa kamida in lagu daaweeyo roomatiisamka iyo jilbe xanuunka waxaana la adeegsadaa saliida dhagayaraha oo la mariyo xubnaha qofka xanuunaayaa sidoo kale waxaa lagu shubaa nabraha iyo dhaawacyada jidhka, waxaa kale oo lagu daaweeyaa sanboorka iyo neefta waxaana loo adeegsadaa in la qiiqsado ama biyo xoogaa kulul lagu daro.
Baro Sida ugu fudud ee siigaysiga loo joojiyo
faaiidooyinka xulbada ee la xaqiijiyay
Faa'iidooyinka timirta ee cilmi baadhis lagu xaqiijiyay
Photo by Pixabay from Pexels Wakhtiga aynu noolnahay waxaa jira dhibaatooyin aad u badan waxaana sababay intooda badan internetka...
Xulbada waa geed daaweed asal ahaan ka soo jeeda dalka India iyo koonfurta qaarada yurub iyo dalalka Mediterranean loo yaqaano iyo waqooyi...
Faaiidooyinka caafimaad ee timirta | Geedka timirtu waa geed ka baxa dhulalka kulaylaha gaar ahaan dhulka aysan ka baxayn badiba dalagyada...
Copyright CaafimaadTips.com All Right Reseved